(၂၄) နှစ် - ခြေထောက်သရုပ်သကန်မရှိတော့ခြင်း၊ ပိုမိုခိုင်မာသောအော်ဂဇင်၊ လိင်မျှသာမဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း - Brain On Porn
(၂၄) နှစ် - ခြေသံလှမ်းသွားပြီ၊ ခိုင်မြဲသောအော်ဂဇင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လိင်မျှသာမဟုတ်ပါ
အဆိုပါ 90 ရက်အကြာမှာကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အတူ masturbating စတင်ဈယခုအကြောင်းကိုတစ်နှစ်အဘို့ဤလုပ်ပါ။ ငါ porn စွဲတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တယ်ပြီးနောက်ငါ၏အ orgasm သလောက်ခိုင်မာတဲ့ကိုယ့်ပထမဦးဆုံး 13 (အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းပါဝင်) မှာ masturbating စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်အားကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲ orgasm ၏အထွတ်အထိပ်မှာနီးပါးမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အားနည်းခဲ့ကြသည်။
သုတ်ရည်လွှတ်ကာလအတွင်းအကောင်းခံစားမိစေရန်ကိုယ့်အချို့အမာခံနှစ်ဆထိုးဖောက်မှု porn သို့မဟုတ်သမျှစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါစွဲစွဲလမ်းသောယောက်ျားစွဲအကြားအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်ထင်သောခိုင်မာတဲ့ခြေလျင် fetish, လေ့ရှိတယ်။ ငါသွားလေရာနေရာတိုင်း၌အရူးကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးခြေထောက်များကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လေ့ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ပေများစွာအကုန်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှပမှုတွေကိုငါသဘောကျနေတုန်းပဲ။
၁၀ နှစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုပြောင်းခြင်းသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါ porn မှာမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုမမှန်သလိုခံစားရတယ်၊ porn ကိုကြည့်တာနဲ့တူတူပဲ။ လပေါင်းများစွာငါ့စိတ်ကူးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့စိတ်ကူးတော့တယ်၊ လိင်လုပ်ရုံသာမကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်အောင်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ် - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အစဉ်အမြဲပုံမှန်ကျန်းမာရေးအရာလိုခံစားလာတယ်၊ orgasm တွေသန်မာလာတယ်။
ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကငါ porn မကြည့်တော့တာ။ ငါချစ်တယ်ကောင်လေးများ / r / pornfree နှင့် / r / Nofap.
LINK - orgasm ချစ်ခြင်းမေတ္တာမယ့်လိင်အောင်အကြောင်းကိုကူးယဉျ, သွားပြီခြေလျင် fetish အားကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်
ငါ့အဘို့ NoFap ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုချစ်ရန်, ပြီးတော့သင်ပတ်လည်ရှိလူတွေမေတ္တာပေးခြင်းစတင်နိုင်ပါသည်လေ့လာပါ။
ငါအသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီ၊ အတိတ်ကဆိုးဝါးတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုခံစားခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ကရက်ပေါင်း ၉၀ တွင် PMO-ing မဟုတ်တော့ပါ။ ကိုယ့်ဒီဘုတ်အဖွဲ့မှ subscribe ကတည်းကငါ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။
ငါလိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောကြောင့်အလွန်ပြောင်းလဲသွားသည်၊ အဲဒီတုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်၊ ငါဟာနေ့တိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမုန်းခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုအထီးကျန်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ခြင်းကိုဒီနည်းနဲ့တိုက်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းမှားခဲ့တယ် ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတီးမိလို့မိဘတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ကိုနာကျင်စေခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူ
ကိုယ့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုလုပ်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုငါ့ဘ ၀ ထဲကဖြတ်ပြီးနောက်မှာတော့ငါဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျလာတယ်။ ငါဖြစ်စဉ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်သင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ရှည်လျားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာမှမလွယ်ကူပါဘူး
ကျွန်တော့်မိဘများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကိုလေးမြတ်တန်ဖိုးထားလာသည်။ ငါဟာအထီးကျန်နေတုန်းပဲ၊ ရည်းစားမရှိဘဲသူငယ်ချင်းအသစ်တွေလည်းမရှိသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်နှက်နေလို့ပါ။ မိန်းကလေးတွေဆီချဉ်းကပ်လာပြီးသူတို့ထဲကတချို့ဟာကျွန်တော့်ကိုတကယ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ငါဘာတစ်ခုမှမဆုံးရှုံးခဲ့ဘူး၊
နောက်ဆုံး၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အမှန်ပင်နာကျင်သည်။ မုန်းဖို့လွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ချစ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဘ ၀ သည်မရပ်တန့်နိုင်သော dopamine အလျင်အမြန်စီးနင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဘဝသည်လည်းနာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ လူတစ်ယောက်လိုနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားဖို့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သင်ယူပါ။ ကောင်းတာတွေကမင်းကိုဖြစ်ပျက်လာမှာပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့် ၁ - မျက်လုံးချင်းနှင့်ညစ်ညမ်း
ကိုယ့် porn ဖြတ်မတိုင်မီကိုယ့်ကိုပင်အနီးကပ်ဆုံးလူတို့နှင့်အတူမျက်လုံးချင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းပြောကဒီမှာရောက်လေ၏။ ဒါဟာငါ့အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားနှင့်မတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသာမီလီစက္ကန်အဘို့ထိုသို့ပြုမှတတ်နိုင်ခဲ့သမျှသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်လာပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာငါဟာတခြားသူတွေကိုနေ့စဉ်မျက်လုံးပြူးစေပြီးအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ ငါမလုပ်ခြင်းဖြင့်ဘဝ၌ဤမျှလောက်လွဲချော်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူတို့အားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နီးစပ်စေခြင်းနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုတည်ဆောက်စေသောအရာများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် - လူ၊ ဒါအံ့သြစရာပဲ၊ အဲဒါကိုဖော်ပြဖို့စကားလုံးများကိုရှာမတွေ့သေးဘူး။
UPDATE2- ငါ့အစာညှပ်များကို toolbar ကိုအတွက် NoFap ၏2နှစ်ကြာပြီးနောက်ဈ pornfree အတူက switched ။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
NoFap porn စွဲအဘို့သည်ကြီးနှင့်လူတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ငါ (90 အတွက်) 2013 ရက်ပေါင်းနှစ်ခုသပိတ်ခဲ့ရပြီး (40 အတွက်) 2014 ရက်။ ဒါဟာစာသားငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ပထမဦးဆုံးသပိတ်မှောက်ပြီးနောက်ကိုယ့်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အဓိကအား sexting ပါဝင်သည်သော fuck ဆိုတဲ့ရဲ့ buddy နဲ့မေတ္တာမဲ့ဆက်ဆံရေး, လုံးဝ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အများကြီး strugled ။ သူမ၏အတူတက်ခြိုးဖောကျပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုထပ် Nofap စတင် 40 ရက်ပေါင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါလုံးဝ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ကပြန်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ ငါ့အသက်ကိုလုံးဝအသွင်ပြောင်း။ ကလူ adressing ကြသည်လူအားလုံးတို့သည်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလုံးဝအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဈ NoFap ဖြတ်နေပါတယ်? ငါရည်းစားရှာပိုကောင်းတဲ့လူမှုရေးဘဝရှိသည်ဖို့ငါ့ကိုဆီးတားသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပြဿနာများ, ရှိသည်ဝန်ခံပါ၏။ သူတို့ထဲကတချို့ကကိုယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုအချိန်တွင်သဘောပေါက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်သူတို့အပျေါမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့မှလွတ်မြောက်စေပြီးတင်းမာမှုကိုလျော့ကျစေသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်း၊ သူမကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မတူအောင်အရှက်ခွဲမပေးဘဲစိတ်ကူးယဉ်မိလျှင်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ၂ နှစ်ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် nofap မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါက pornfree ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး